चिप बैंक कार्डले कसरी काम गर्दछ? | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
चिप बैंक कार्डहरू कसरी काम गर्छन्?
चिप कार्डहरू उही प्रविधि प्रयोग गरेर उत्पादन गरिन्छ, तर जानकारीको साथ चुम्बकीय टेपको सट्टा, कार्डहरूमा एउटा विशेष चिप निर्माण हुन्छ। यस्तो चिप लगभग मिनी कम्प्युटर हो। चिपहरूको साथ कार्डहरूले तपाईंलाई कुनै पनि प्रकारको जानकारी भण्डारण गर्न अनुमति दिन्छ - बैंकि operations सञ्चालनको इतिहास र प्राप्त सेवाहरूको संख्याबाट।
चिप कार्डहरू अत्यधिक कार्यशील छन्। यदि अब तपाईंको वालेटमा त्यहाँ धेरै कार्डहरू छन्: क्रेडिट, बोनस, छुट र क्लब, र सबै चुम्बकीय पट्टीका साथ, तब चिप सहितको प्लास्टिक कार्डहरूले यी सबै जानकारीहरू भण्डारण गर्न सक्दछन्। उदाहरण को लागी, चिप्स संग बैंक कार्डहरु एक परिचय पत्र को रूप मा प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यो हो, चिपहरूको साथ कार्डहरूले प्लास्टिकको दुई उद्देश्यका संयोजन गर्दछ - भुक्तान र पहिचान।
चिप्स सहितको प्लास्टिक कार्डहरू पनि परम्परागत कार्डहरूको तुलनामा बढेको सुरक्षाले चित्रण गर्दछ किनकि यस्तो चिप फोर्ज गर्ने काम सजिलो छैन।
चिपहरूको साथ कार्डहरू सम्पर्क र सम्पर्कविहीनमा विभाजन गर्न सकिन्छ। एक चिपको साथ सम्पर्क प्लास्टिक कार्डहरू पाठकसँग जोडिएको हुनुपर्दछ। त्यो हो, चिप कार्डमा जानकारी प्रसारित गर्न, विशेष उपकरणमा भौतिक पहुँच आवश्यक छ। यद्यपि सम्पर्क रहित चिप कार्ड प्रयोग गरेर यसलाई बचाउन सकिन्छ।
त्यस्ता कार्डहरू पाठकहरूको दायरामा हुनका लागि र रेडियो सिग्नल मार्फत डाटा प्रसारण गर्नका लागि पर्याप्त छ। एक पाठकको साथ सम्पर्क चिप कार्डहरूको निरन्तर सम्पर्क दिएमा, उनीहरूको स्थायित्व यति उच्च छैन। सम्पर्क रहित चिप कार्डहरू, बदलेमा, लामो समय सम्म रहनेछ।
चिप कार्डहरू Europe० को दशकदेखि यूरोपमा प्रयोग भइरहेको छ, र अब तिनीहरू विश्वव्यापी रूपमा पारम्परिक चुम्बकीय पट्टी प्लास्टिक कार्डहरू प्रतिस्थापन गर्दैछन्। रुसिका अधिक बैंकहरूले चिप्सको साथ कार्डहरू प्राथमिकता दिन्छन्, मुख्य रूपमा तिनीहरूको ह्याकि to प्रतिरोधको कारण।
चिप कार्डहरू स्कूलहरू, विश्वविद्यालयहरू र विभिन्न संगठनहरूमा एक थ्रूपुट प्रणालीको साथ पनि प्रयोग गरिन्छ।
उदाहरण को लागी, यातायात कार्डहरु चिपको साथ प्लास्टिक कार्ड प्रयोग गर्ने धेरै उदाहरण मध्ये एक हो।
शीर्ष गोप्य ...
लिंक परियोजना प्रशासनको निर्णयले ब्लक गरिएको छ
पोस्ट बैंक र क्रेडिट्स
21 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,250 प्रश्नहरू।